ဝနျထမျးတှကေို အတိုးမဲ့ (၂) လစာ ခြေးငှေ၊အိမျငှားခ နဲ့ လစာ အပွငျ ဆနျအိတျတှပေါ ထောကျပံ့ပေးတဲ့ အလုပျရှငျ – စှယျစုံသုတ
ဝနျထမျးတှကေို အတိုးမဲ့ (၂) လစာ ခြေးငှေ၊အိမျငှားခ နဲ့ လစာ အပွငျ ဆနျအိတျတှပေါ ထောကျပံ့ပေးတဲ့ အလုပျရှငျ
ဝန်ထမ်းတွေကို အတိုးမဲ့ (၂) လစာ ချေးငွေ၊အိမ်ငှားခ နဲ့ လစာ အပြင် ဆန်အိတ်တွေပါ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အလုပ်ရှင်
ဒီအချိန်မှာ အိမ်မှာ နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတချို့ကလွဲရင် ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်မဆင်းခိုင်းပေမယ့် ထောက်ပံ့ရိက္ခာနဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ လစာပေးထားခဲ့တယ် ။
ဒါပေမယ့် တချို့ဝန်ထမ်းလေးတွေရဲ့ တခြားမိသားစုဝင်တွေ အရင်လို အလုပ်အကိုင်တွေ အဆင်မပြေကြတော့တာ ကြားမိတယ် ။
တချို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေမှာ Taxi ဆွဲတဲ့သူရှိတယ်။ တချို့က ဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ တချို့က စာသင်တယ်။တချို့က ကျောင်းကားဆွဲတယ် . စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီကာလမှာက တချို့အလုပ်အကိုင်တွေက . ဝင်ငွေနည်းသွားတယ် . တချို့က ဝင်ငွေ လုံးဝ မရှိတော့ဘူး။
လစာအရမ်းကောင်းကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ရင် အိမ်တစ်အိမ်မှာ ကလေးငယ်တွေကလွဲပြီး မိသားစုဝင်အကုန်လုံးနီးပါး အလုပ်လုပ်မှ အဆင်ပြေမယ့် ကာလမို့ အခုချိန် တော်တော်များများအဆင်မပြေဘူး။Lady Grace Diamond Land က ရတဲ့လစာနဲ့ ထောက်ပံ့ရိက္ခာကြောင့် . စားစရိတ် မပူရပေမယ့် အိမ်ငှားနေတဲ့သူတွေအတွက် အိမ်ငှားခ ပူရနိုင်တယ်။
ကလေးအငယ်လေး ရှိသူတွေအတွက် နို့မှုန့်ဖိုး၊ သက်ကြီးရွယ်အို အမိအဖရှိသူတွေအတွက် ဆေးဖိုး ၊ စတဲ့ တခြား ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် ငွေလိုနိုင်တယ်လို့ တွေးမိတယ်။ဒါကြောင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးစီကို သူတို့ရသင့်တဲ့ လစာနဲ့ ထောက်ပံ့ရိက္ခာအပြင် ၂ လစာ ချေးငွေကိုပါ ထုတ်ချေးခဲ့တယ် ။
လုံးဝ အတိုးမဲ့ပါ ။ လုပ်ငန်းတွေ ပုံမှန် ပြန်လည်ပါတ်တဲ့အချိန်ရောက်မှ လစဉ် ခွဲပြီး ဆပ်ရုံပါ။ ဒီလို လုပ်ပေးဖို့က အများကြီး စဉ်းစားရပါတယ် ။အထူးသဖြင့် ဒီလို ကာလမှာပါ ။
ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ချေးငွေက တစ်ယောက်ကို ၂ လစာပဲ ရတာဆိုပေမယ့် ဝန်ထမ်းအားလုံးကို ပေးရတဲ့ ဆိုင်အနေနဲ့က သိန်းရာနဲ့ချီတယ်လေ ဒါတောင် Video ထဲမှာ . နယ်ပြန်သွားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပန်းတိမ်ဆရာတွေ မပါသေးဘူး။
အရင်က Online ရောင်းအားအပြင် ဆိုင် ၂ ဆိုင်စာ ရောင်းအားရှိနေတော့ ဝင်ငွေပိုကောင်းတယ် ။ ဒါပေမယ့် အခုက Online ရောင်းအားပဲ ရှိတာကြောင့် ဝင်ငွေက အရင်နဲ့စာရင် . ၃ ပုံ ၁ ပုံပဲ ရှိတယ်။ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ထက် ပိုခက်ခဲနိုင်မယ့် ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေကို စဉ်းစားမိပြီး ဒီအစီအစဉ်လေး လုပ်ပေးဖြစ်ခဲ့တာပါ ။
ဒီလိုအကြပ်အတည်းကာလမှာ မထင်ထားခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းကလေးတွေစီက မမတို့နဲ့အတူ အခက်အခဲကာလကို . အတူတူဖြတ်ကျော်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လေးတွေ တွေ့ရလို့ ကျေနပ်မိတာတော့ အမှန်ပါ ။တချို့ဝန်ထမ်းလေးတွေက . လစာရော . Bonus ရော ရတာမို့ ငွေမလိုသေးလို့ ချေးငွေ မယူတော့ ပါဘူး. အစ်ကိုနဲ့မမတို့ ကုန်ကျတာတွေ အရမ်းများတာ သိလို့ပါ ဆိုတဲ့သူတွေတောင် ရှိတယ် ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့လေးတွေ ပျော်နေတာတွေ့တော့ ကျေနပ်ရပါတယ်။ တစ်ချို့ဝန်ထမ်းလေးတွေဆို ရတဲ့ငွေ စုစုပေါင်းက သိန်းဆယ်ဂဏာန်းအထက် ငှက်တစ်သောင်းနားနိုင်တဲ့ သစ်ပင်ကောင်းတစ်ပင် မဖြစ်နိုင်သေးပေမယ့်
ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို လုံခြုံတဲ့ အရိပ်အာဝါသပေးနိုင်တဲ့ . သစ်ပင်လေးတစ်ပင် ဖြစ်ခွင့်ရတာကို ကျေနပ်မိပါတယ် ။အားလုံးလည်း ဒီကာလကြီးကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ြ
ဒီအခြိနျမှာ အိမျမှာ နတေဲ့ ဝနျထမျးတခြို့ကလှဲရငျ ကိုယျ့ဝနျထမျးတှကေို အလုပျမဆငျးခိုငျးပမေယျ့ ထောကျပံ့ရိက်ခာနဲ့ ထိုကျသငျ့တဲ့ လစာပေးထားခဲ့တယျ ။
ဒါပမေယျ့ တခြို့ဝနျထမျးလေးတှရေဲ့ တခွားမိသားစုဝငျတှေ အရငျလို အလုပျအကိုငျတှေ အဆငျမပွကွေတော့တာ ကွားမိတယျ ။
တခြို့ဝနျထမျးတှရေဲ့ မိသားစုဝငျတှမှော Taxi ဆှဲတဲ့သူရှိတယျ။ တခြို့က ဈေးဆိုငျဖှငျ့ထားတယျ။ တခြို့က စာသငျတယျ။တခြို့က ကြောငျးကားဆှဲတယျ . စသဖွငျ့ပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ဒီကာလမှာက တခြို့အလုပျအကိုငျတှကေ . ဝငျငှနေညျးသှားတယျ . တခြို့က ဝငျငှေ လုံးဝ မရှိတော့ဘူး။
လစာအရမျးကောငျးကွတဲ့ ဝနျထမျးတှမေဟုတျရငျ အိမျတဈအိမျမှာ ကလေးငယျတှကေလှဲပွီး မိသားစုဝငျအကုနျလုံးနီးပါး အလုပျလုပျမှ အဆငျပွမေယျ့ ကာလမို့ အခုခြိနျ တျောတျောမြားမြားအဆငျမပွဘေူး။Lady Grace Diamond Land က ရတဲ့လစာနဲ့ ထောကျပံ့ရိက်ခာကွောငျ့ . စားစရိတျ မပူရပမေယျ့ အိမျငှားနတေဲ့သူတှအေတှကျ အိမျငှားခ ပူရနိုငျတယျ။
ကလေးအငယျလေး ရှိသူတှအေတှကျ နို့မှုနျ့ဖိုး၊ သကျကွီးရှယျအို အမိအဖရှိသူတှအေတှကျ ဆေးဖိုး ၊ စတဲ့ တခွား ကုနျကစြရိတျတှအေတှကျ ငှလေိုနိုငျတယျလို့ တှေးမိတယျ။ဒါကွောငျ့ ဝနျထမျးတဈဦးစီကို သူတို့ရသငျ့တဲ့ လစာနဲ့ ထောကျပံ့ရိက်ခာအပွငျ ၂ လစာ ခြေးငှကေိုပါ ထုတျခြေးခဲ့တယျ ။
လုံးဝ အတိုးမဲ့ပါ ။ လုပျငနျးတှေ ပုံမှနျ ပွနျလညျပါတျတဲ့အခြိနျရောကျမှ လစဉျ ခှဲပွီး ဆပျရုံပါ။ ဒီလို လုပျပေးဖို့က အမြားကွီး စဉျးစားရပါတယျ ။အထူးသဖွငျ့ ဒီလို ကာလမှာပါ ။
ဝနျထမျးတှအေနနေဲ့ ခြေးငှကေ တဈယောကျကို ၂ လစာပဲ ရတာဆိုပမေယျ့ ဝနျထမျးအားလုံးကို ပေးရတဲ့ ဆိုငျအနနေဲ့က သိနျးရာနဲ့ခြီတယျလေ ဒါတောငျ Video ထဲမှာ . နယျပွနျသှားတဲ့ ဝနျထမျးတှနေဲ့ ပနျးတိမျဆရာတှေ မပါသေးဘူး။
အရငျက Online ရောငျးအားအပွငျ ဆိုငျ ၂ ဆိုငျစာ ရောငျးအားရှိနတေော့ ဝငျငှပေိုကောငျးတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အခုက Online ရောငျးအားပဲ ရှိတာကွောငျ့ ဝငျငှကေ အရငျနဲ့စာရငျ . ၃ ပုံ ၁ ပုံပဲ ရှိတယျ။ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ထကျ ပိုခကျခဲနိုငျမယျ့ ဝနျထမျးမိသားစုတှကေို စဉျးစားမိပွီး ဒီအစီအစဉျလေး လုပျပေးဖွဈခဲ့တာပါ ။
ဒီလိုအကွပျအတညျးကာလမှာ မထငျထားခဲ့တဲ့ ဝနျထမျးကလေးတှစေီက မမတို့နဲ့အတူ အခကျအခဲကာလကို . အတူတူဖွတျကြျောမယျဆိုတဲ့ စိတျလေးတှေ တှရေ့လို့ ကနြေပျမိတာတော့ အမှနျပါ ။တခြို့ဝနျထမျးလေးတှကေ . လစာရော . Bonus ရော ရတာမို့ ငှမေလိုသေးလို့ ခြေးငှေ မယူတော့ ပါဘူး. အဈကိုနဲ့မမတို့ ကုနျကတြာတှေ အရမျးမြားတာ သိလို့ပါ ဆိုတဲ့သူတှတေောငျ ရှိတယျ ။
ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ သူတို့လေးတှေ ပြျောနတောတှတေ့ော့ ကနြေပျရပါတယျ။ တဈခြို့ဝနျထမျးလေးတှဆေို ရတဲ့ငှေ စုစုပေါငျးက သိနျးဆယျဂဏာနျးအထကျ ငှကျတဈသောငျးနားနိုငျတဲ့ သဈပငျကောငျးတဈပငျ မဖွဈနိုငျသေးပမေယျ့
ကိုယျ့ပါတျဝနျးကငျြက လူတှကေို လုံခွုံတဲ့ အရိပျအာဝါသပေးနိုငျတဲ့ . သဈပငျလေးတဈပငျ ဖွဈခှငျ့ရတာကို ကနြေပျမိပါတယျ ။အားလုံးလညျး ဒီကာလကွီးကို အဆငျပွပွေနေဲ့ ဖွတျကြျောနိုငျကွပါစနေျော။
SSPP နယျမွတှေငျ တရုတျထုတျ ကိုဗဈကာကှယျဆေး ထိုးနှံပေး